Suspension mwekota D8
ADSS nkwusioru mwekota D8 mere maka nkwusioru gburugburu ADSS eriri optic USB ma ọ bụ dobe waya USB na FTTX ewu. ADSS nkwusioru mwekota D8 bụ dielectric na etinyere n'èzí na ụzọ gasị na akụkụ <20, na obere jikọrọ abụọ abụọ ruo 100 mm.
Dielectric ADSS nkwusioru mwekota dị mfe maka echichi, na ọ dịghị achọ ọzọ ngwaọrụ. Nke a na ụdị ADSS nkwusioru mwekota anyị handily gbanwee plastic loop na-enye ohere mfe echichi na cross-aka ma ọ bụ nkwusioru brackets na FTTH nko, dị ka mma.
Suspension mwekota D8 nwere neoprene aka uwe maka cable diameters 8-12 mm na 12-16 mm, nke na-ekpuchi ọtụtụ na-ewu ewu àmà nke na-efefe n'elu ADSS Gịnị. The aka uwe-enye ndị magburu onwe igbaso na USB na amụma mkpuchi pụrụ ịdabere fixation na oge.
USB size, mm
Materials: UV eguzogide thermoplastic, ịkwanyere.
ADSS nkwusioru mwekota na FTTH cable ngwa dị ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ. Jera si ADSS plastic nkwusioru clamps a nwalere na kwupụtara iji mezuo ihe ndị a chọrọ nke ndị ahịa anyị.
Anyị na-elekwasị anya na àgwà na-ezu nso nke ADSS cable clamps, nke na-agụnye: ADSS erughị ala mwekota, cross-na ogwe aka, ahụ erughị ala na nkwusioru brackets, nchupu igbe, eriri optic splice closures, na ndị ọzọ eriri optic cable ngwa.
Previous: Eriri Optic nkwụnye SC
Osote: Dobe Waya mwekota D2
ADSS nkwusioru clamps
Dielectric ADSS mwekota
Dielectric ADSS nkwusioru mwekota
Eriri Optic USB mwekota
ADSS USB Anchor mwekota PA-500
FTTH dobe USB, 1 Fiber
FTTH USB mgbodo, YK
ADSS Suspension mwekota, HC
LV ABC Suspension mwekota, SHC